sawehlor: April 2012
Posted by saw ehlor at 12:470comments
Posted by saw ehlor at 11:400comments
SBSangpi(စံပီး)ဆီမှ သမ္မာကျမ်းစာကို Android OS (Phone/Tab tablet) တွေမှာဖတ်ချင်သူတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Myanmar-Bible(Pdf) ကိုဖတ်နိုင်ရန်အတွက် ThinkFree Office Mobile ကိုတစ်ခါတည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။နှစ်ခုစလုံးကိုဒေါင်းလုတ်ယူရမည်၊၊
Posted by saw ehlor at 12:070comments
Android ဖုန်းတွေအတွက် မြန်မာပြက္ခဒိန် application လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ application လေးကိုသုံးဖို့ ဖုန်းကို root လုပ်စရာလည်းမလိုပါဘူး။ အသုံးပြုနည်းကတော့ အောက်မှာပြောပြထားပါတယ် ။ မူရင်းလင့်ကိုတော့ https://www.facebook.com/pages/MmCalendar/250310871699852 မှာသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံကို မူရင်း developer ရေးသားထားတဲ့အတိုင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by saw ehlor at 12:390comments
Labels: မြန်မာပြက္ခဒိန် MM Calendar for Android
ThinkFree Office Mobile v4.2.120417 for Android (full version)
Posted by saw ehlor at 22:070comments
Labels: Office Mobile
Androidဖုန်းတွေအတွက်ကော..လက်ရှိပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ကောစီးပွားရေးသမားတွေအတွက်ကော အသုံးဝင်မဲ့ ( Real scientific calculator) apk လေးဖြစ်ပါတယ်..။အကောင်းဆုံး Application စာရင်းဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်.
Memory Sim card ထဲထည့်ပြီး ဖုန်းကနေ install လုပ်ပေးရုံပါ..
Posted by saw ehlor at 20:430comments
Labels: Calculator (Android OS)
DVD အခွေတစ်ခွေကို လယ်လွယ်ကူကူနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် Create လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် Xilisoft DVD Creator ဆော့ဝဲလ်လေးပါ......။ Convert လုပ်ပေးနိုင်မယ့် formats ကတော့ AVI to DVD, WMV, ASF, DivX, Xvid, 3GP, MP4, MPEG to DVD and burn DVD movie အပါအ၀င် တစ်ခြား DVD Player တွေနဲ့လဲ ဖွင့်လို့ရပါတယ် Nero ဆော့ဝဲလ်မရှိတဲ့သူတွေအတွက် ပိုပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်..........း)
Posted by saw ehlor at 00:36 1 comments
RegUtility_2011_v4 +Crack.rar (3 MB)
မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါ!!! ပြဿနာကတော့ (ifrmewrk.exe ) ကြောင့် မိမိတို့ ကွန်ပျူတာမှာ the application was unable to start correctly(ox0000007b).click ok to close application error massage ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း ဖြစ်ပါတယ်. ဒီ (ifrmewrk.exe ) ဆိုတာက virus တစ်မျိုးပါဘဲ များသောအားဖြင့် wireless devices တွေကြောင့် ဖြစ်တက်ပါတယ်.
ဒီဆော့ဝဲလ် လေးကတော့ ဆော့ဝဲလ် တွေ နေ့စဉ် နေ့တိုင်း အသွင်းအထုတ် လုပ်နေတဲ့ ကျနော့အတွက်တော့ တော်တော်လေး အားကိုးရတဲ့ ဆော့ဝဲလ် လေးပါ...အရင်ကလဲတင်ပေးဖူးပါတယ် ဒီနေ့တော့ Update လေးတွေ့လို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...။
Antivirus က ဖယ်ရှင်းမပေးနိုင်တဲ့ Malware , Spyware , Adware , Trojans , Keylogger , Bots , Worm နဲ့ Hijacker
တွေကို ကာကွယ် ရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်..။
Posted by saw ehlor at 01:030comments
Labels: Security 360
သည်အမျိုးသမီး(မြန်မာစာတမ်းထိုး) from thanhtut on Vimeo.
Posted by saw ehlor at 11:310comments
Ko Htay Oo
autocad 2010 ကို ဒီနေရာလေးမှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ် ...။
ဒါမှမဟုတ်ရင် AutoCAD 2010 ကို သူ့ရဲ့ မူရင်းဆိုက် (usa.autodesk.com) မှာ Trialversion လေးကို ဒေါင်းယူလိုက်ပါ.....။
ပြီးတော့ ဒီ Activation လေးကို ဒေါင်းပြီး C: >> Program File >> Autocad 2010 ထဲမှာ ကော်ပီကူးထည့် ပေးလိုက်ရင် AutoCAD 2010
Full Version လေးဖြစ်သွားမှာပါ....။
ကွန်ပြူတာ သုံးသူတိုင်း မိမိ တို့ရဲ့ စက်လေးကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် အလုပ် လုပ်တာကို လိုချင်ကြမှာပါ ...။
Posted by saw ehlor at 11:110comments
Posted by saw ehlor at 11:08 1 comments
iPhone 4G/ 3GS / 3G အသုံးပြုမှုလက်စွဲ လမ်းညွှန် ( မြန်မာ Ebook )
i Phone 4G/ 3GS / 3G အသုံးပြုမှုလက်စွဲ လမ်းညွှန်
မြန်မာ Ebook လေးပါ။
iPhone ကို ခုမှ စတင် ၀ယ်ယူပြီး
iPhone ကို စတင်ဝယ်ယူလျှင် ဗူးထဲမှာ
ဘာတွေပါသလဲ ကနေ နာရီပိုင်းအတွင်းနဲ့
နားလည်သဘောပေါက်ပြီး iPhone ကို စတင် အသုံးပြုလို့ရမဲ့
Posted by saw ehlor at 09:290comments
Posted by saw ehlor at 11:020comments
ကျနော်တို့ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ Registry Error တွေကိုပြုပြင်ပေးမဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ။
Posted by saw ehlor at 22:560comments
Labels: Registry Booster
Posted by saw ehlor at 10:060comments
iPad,iPhone,iPod တွေကို jailbreak လုပ်စရာမလိုပဲ website တွေကို မြန်မာစာပေါ်အောင်
အခု ကျွန်တော်ပြောမယ့် application လေးကတော့ iPad တွေ iPhone တွေ iPod တွေမှာ jailbreak လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ မြန်မာစာပေါ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့
application လေးပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီ application လေးက website တွေကြည့်ရှုရာမှာပဲသုံးလို့ရပါမယ်။ လိုချင်တယ်ဆိုရင် အောက်က link မှာသွားရောက်ရယူနိုင်ပါတယ်။
Myanmar Browser အားရယူရန်(View in iTune Store)
Posted by saw ehlor at 12:410comments
Labels: iPad, iPhone, iPod တွေကို jailbreak လုပ်စရာမလိုပဲ မြန်မာစာပေါ်အောင်
အပျင်းပြေ စစ်တုရင်ကစားချင်သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Download Portable Kasparov-Chess(game-2)
Posted by saw ehlor at 11:080comments